Baba nemwana vakaba mombe 17 | Kwayedza
Baba nemwana vakaba mombe 17
03 Aug, 2018 - 00:08	 2018-08-02T14:28:19+00:00 2018-08-03T00:04:51+00:00 0 Views
MAPURISA ekuCashel Valley, kuChimanimani, vari kutsvaga baba nemwana nemhosva dzavari kupomerwa dzekuba mombe 17 idzo vanonzi vakaenda nadzo vachida kunodzitengesa kune imwe nzvimbo kunharaunda iyi dzikazowanikwa vasati vawana vanotenga.
Mutevedzeri wemutauriri wemapurisa kudunhu reManicaland, Assistant Inspector Luxson Chananda, vanoti Phineas Chitsuro nemwana wake Edmore Chitsuro vari kupomerwa mhosva yekuba mombe idzi.
“Sezvatagara tichiita semapurisa eZRP, nedonzvo rekurwisa kuparwa kwemhosva munyika, mapurisa edu ekuCashel Valley ari kutsvaga varume vaviri vanova baba nemwana vanoti Phineas Chitsuro nemwana wake Edmore Chitsuro nemhosva dzavari kupomerwa dzekuba mombe dzinokwana 17,” vanodaro.
Baba nemwana ava vanofungidzirwa kuti vakaba mombe idzi kumafuro ndokuenda nadzo mudunhu iri vachiti ndedzavo idzo vaifamba vachishambadza kuti dzitengwe.
“Nyaya iyi yabuda pachena uye vaviri ava vaziva kuti vaidiwa nemapurisa, vakabva vatiza musha ndokuenda kusina anoziva. Tinoti kune vanenge vachiziva kune vaviri ava vazivise mapurisa ekuCashel Valley kana mapurisa ari padyo navo,” vanodaro.
Sezvo dunhu reChimanimani rakatevedza muganhu wenyika ino neyeMozambique, baba nemwana ava vanofungirwa kuti vangangodaro vakatizira kuMozambique.
Vanoti zvakakosha kuti vagari venzvimbo iyi nevekune mamwe matunhu vagare vachifudza mombe dzavo nguva dzose vachidziisa mumatanga kuti vasape makororo mikana yekudziba.
Vanoenderera mberi vachiti, “Nechinangwa chekuchengetedza mombe dzedu, tinokurudzira varimi kuti vafudze mombe dzavo nguva dzose vachidzivharira mumatanga nekuti mumwe anofunga kuti mombe dzake dzirimo mumakura asi idzo dzakabiwa kare.”